बाजुरामा हुने खानेको नाम पनि अति विपन्नमा दर्ता, पूर्वमन्त्रीसमेत गरिब ! « NBC KHABAR
बाजुरामा हुने खानेको नाम पनि अति विपन्नमा दर्ता, पूर्वमन्त्रीसमेत गरिब !
बाजुरा, ३० असोज । विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने सरकारी कार्यक्रममा चरम वेथिति भएको छ । बझाङ, बाजुरा लगायका जिल्लामा सुविधा पाइने लालचले पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक लगायत समाजका हुनेखानेहरु पनि ‘गरिव हुँ’ भनेर परिचय पत्र लिन अघिसरेका छन् ।
यस्तै मध्ये २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा २०५८ सालमा बनेका भुमिसुधार सहायकमन्त्री बनेका बाजुरका जनकराज गिरीको नाममा अति गरिबको सूचिमा छ । सांसद हुनु पुर्व स्थायी शिक्षक समेत रहेका गिरीको आर्थिक अवस्थामा अति गरीबको सुचिमा सुचिकृत हुने खालको छैन ।
यस्तै ३ पटकसम्म जिल्ला विकास समितिको सदस्य भइकेका अजबहादुर मल्लको मार्तडीमा दाजुभाई गृल उद्योग तथा हिमाली गाँउपालिकामा निजी बोर्डिङ स्कुल समेत छ । तर उनको नाममा पनि अति गरिबको सूचिमा सूचिकृत छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख डा.रुपचन्द्र विश्वकर्माका बुवा नरवीर कामीका बाबुको नाम समेत गरिबको सूचीमा छ । डा छोराका बाबु पनि अति गरिबको सुचिमा देखिनु अच्चम लाग्दो छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी समेत भइकेका हाल खापर गाँउपालिकाका लेखापाल खम्वीर बुढाकी आमा सेते बुढाको नाम पनि क बर्गको अति गरिबको सुचिमा छ ।
स्वामी कार्तिक खापर–२, साप्पाटास्थित राधुमाता माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाशबहादुर बमका बुबा बृजबहादुर वमको नाम मध्यम गरिबको सूचिमा छ । हिमाली गाउँपालिका– ४, बछ्यास्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवकुमारी मल्लका बुबा रत्नबहादुर मल्लको नाम पनि मध्यम गरिबको सूचीमा समावेश छ । बाजुराका २२ हजार ३ सय घरपरिवार मध्ये १३ हजार ८ सय २६ परीवार गरिबीको सचीमा छन् ।
यस मध्ये स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु अधिकांशको नाममा गरिबिको सुचीमा परेको छ । बरु वास्तविक पीडितको नाममा गरिबिको रेखा भन्दा माथि रहेको सुचिमा परेको देखिन्छ । तथ्याङक संकलन गर्ने कर्मचारी नै भएपछि पावर पहुँचका आधारमा गरिब छुट्टाएको देखिन्छ ।
तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्मार्ण गरेको गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका अनुसार ‘क’ बर्गका गरिब अर्थात अत्यन्तै गरिबमा वार्षीक १९,६०० रुपैया खर्च गर्न नसक्ने परिवार पर्छ ।
त्यसैगरी वार्षीक ३१,६०० रुपैया खर्च गर्न नसक्ने परिवार ‘ख’ बर्गको गरिबमा पर्छ भने ‘ग’ बर्गको सामान्य गरिबमा वार्षीक ४०,०००।– रुपैया खर्च गर्न नसक्ने परिवार पर्छ ।” निर्देशिका अनुसार ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय’ ले २०७० मा तयार पारेको प्रतिवेदनले बाजुराको गरिबी ७१.१ प्रतिशत पुगेको छ र नेपालको उच्च गरिबीयुक्त २५ जिल्लामा बाजुरा पहिलो नम्बरमा पर्छ ।